Kyi Aye (Literature): ဖုန်းသက်တိုင် ( အပိုင်း - ၇ ) ဇာတ်သိမ်း
Posted by Aung Phyoe at 11:11
Rita 10 August 2010 at 14:04
nzm 11 August 2010 at 01:12
Thanks for posting! Never read this novel before. Enjoyed so much. Thanks.
မေဓာဝီ 26 August 2010 at 14:34
အစအဆုံး တညလုံး ထိုင်ဖတ်သွားတယ်။
ZWE SOE LWIN 11 December 2011 at 13:39
အဆုံးသတ်ကလေးအောက်က unfrogettable ဆိုတဲ့ မှတ်ချက်နဲ့လက်မှတ်ကလေးကို စာအုပ်ဟောင်းလေးရဲ့ စာမျက်နှာပေါ်မှာတွေ့လိုက်ရတော့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ်။ THE CLASSICS ကိုရီးယားရုပ်ရှင်လိုမျိုး။ ကျနော် အစပိုင်းတစ်ရွက်နှစ်ရွက်ပဲ ဖတ်ရသေးတယ်။ အိမ်မှာအကုန်ဖတ်ပြီး ကွန်မန့်ထပ်လာပေးဦးမယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။